Iziphesheli Zamagajethi | Izindaba zamagajethi
Amadili amahle kakhulu kumagajethi (ngesonto lika-Meyi 18 kuya ku-24)
U-Ignacio Sala | | Amazon
Uma ungumthandi wezobuchwepheshe, kungenzeka ukuthi uthande ukugcina usesikhathini nezindaba ezihlobene namadivayisi we-elekthronikhi noma amagajethi athakazelisa kakhulu emakethe. Ku-Actualidad Gadget senza ukulandelela okukhethekile, kokuthile esizibiza ngakho. Ngaphezu kwalokho, ngale ndatshana sikukhombisa amadili wegajethi athakazelisa kakhulu kuleli sonto.
Ngalesi sihloko, lokho sibuyekeza masonto onke, sizokukhombisa okunikezwayo okuyinhloko nokuhle kakhulu kwe- Amazon yaleli sonto. Kepha hhayi kuphela, ngoba uzokwazi nokuthola okunikezwayo kwe- AliExpress noma esinye isitolo esiku-inthanethi. Khumbula ukubekisa leli khasi ukuze ukwazi ukusivakashela njalo ngoMsombuluko, lapho sibuyekeza leli khasi, ukuze ubheke ukuthi ngabe ngabe idivayisi oyifunayo yehlile yini ngentengo.
I-Amazon iyasivumela khokhela ukuthenga ngezitolimende ezi-4 zenyanga, okuzosivumela ukuthi sithenge imali enkulu futhi sikwazi ukuyikhokha ngokunethezeka kuzinkokhelo ezine zenyanga. Lolu hlobo lwezezimali luyatholakala ngamanani kusuka kuma-75 kuya kuma-1000 euros futhi ingaphansi kokuvunywa yi-Cofidis. Uma umkhiqizo utholakalela ukuxhaswa ngezimali, lokhu kuzoboniswa eceleni kwentengo yokugcina yomkhiqizo.
1 Amadili wesonto likaMeyi 18-24 ku-Amazon
1.1 Imikhiqizo ye-Amazon
1.2 55/65 intshi Samsung 4k TV
1.3 ICecotec Series 1490 Yokuhlanza Amarobhothi
1.4 I-Moulinex processor yokudla
1.5 I-Samsung Galaxy A71 yama-euro angu-391
1.6 I-Samsung Galaxy A51 yama-euro angu-299
1.7 I-Samsung Galaxy A40 yama-euro angu-199
1.8 I-Samsung Galaxy Note 10 yama-euro angama-687
1.9 IHuawei P30 Pro ngama-euro ayizi-550
1.10 IHuawei P30 Lite ngama-euro angama-199
1.11 I-Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ngama-euro angu-189,95
1.12 I-Oppo A9 2020 yama-euro angu-184,99
1.13 I-Realme X2 Pro yama-euro angama-439
1.14 I-Realme 5 Pro yama-euro angama-219
Amadili wesonto likaMeyi 18-24 ku-Amazon
I-Amazon iphinde isinikeze ukukhuthazwa kokufinyelela ku- I-Amazon Music Unlimited izinyanga ezintathu ngama-euro angu-0 kuphela. Lokhu kukhushulwa, njengakudala, kutholakala kuphela kumakhasimende angakasisebenzisi kahle lesi sipho abafana noJeff Bezos abasinikeza njalo.
Uma into yakho kungewona umculo, mhlawumbe izincwadi. Uma kunjalo, I-Amazon inikeza inyanga eyodwa yokufinyelela ku-Kindle Unlimited, insizakalo yezincwadi enentengo ejwayelekile yama-euro angu-9,99 ngenyanga. Lokhu kunikezwa kusinikeza ukufinyelela kwezihloko ezingaphezu kwezigidi eziyi-1, izihloko esingazifunda kunoma iyiphi idivayisi, kungaba i-Kindle, ithebhulethi noma i-smartphone, kungakhathalekile ukuthi isebenza kanjani.
Ukubungaza ukubuyela esikoleni, abafana abavela e-Amazon baqale isithembiso esizokwamukelwa kakhulu ngabafundi. Sikhuluma ngakho I-Amazon Prime Student, insizakalo yama-euro angama-18 kuphela ngonyaka, isivumela ukuthi sijabulele zonke izinzuzo ezinikezwa yi-Amazon Prime, intengo yayo ingama-euro angama-36 ngonyaka.
Uma ungacaciswanga ngobuhle i-Amazon Prime ikunikeza, ungazama izikhathi ezi-3 mahhala. I-Amazon Prime ayithumeli mahhala kuphela emikhiqizweni engaphezu kwezigidi ezimbili, kodwa futhi iyasinika I-Prime Video (Isevisi yokusakaza ividiyo ye-Amazon), I-Prime Music (Izingoma eziyizigidi ezi-2 ngaphandle kwezikhangiso),I-Twitch Prime, i-Prime Reading (ukufinyelela mahhala kwinani elikhulu lama-e-book), ukufinyelela okubalulekile kokunikezwa kwe-flash ...
Ukubhalisela le nsizakalo, ungakwenza ngalesi sixhumanisi, kudingekile kuphela ukuthi wena bhalisa usebenzisa i-akhawunti ye-imeyili yomfundi, ukuze ngaleso sikhathi, i-Amazon ibheke ukuthi ungumuntu ozobhapathizwa ukujabulela i-Amazon Prime ngama-euro angama-18 kuphela ngonyaka.
I-Amazon isinikeza i-Amazon Echo Show 8 entsha, i-Echo Show entsha enosayizi omkhulu wesikrini kune-Echo 5, le modeli ingamasentimitha ayi-8. Mayelana nokusebenza, siyafana nomfowabo omncane, ngakho-ke uma imodeli yokuqala ibincane kakhulu kuwe, le nguqulo entsha, itholakalela ama-euro ayi-129,99kepha izinsuku ezimbalwa, singayithola ngama-euro angu-89,99 kuphela.
Ku-Actualidad Gadget sithole ithuba lokuthi zama i-Echo Show 8 entsha, isibuyekezo engincoma ukuthi usibone Uma ungakaqiniseki ukuthi ngabe isipikha esihlakaniphile nesikrini yilokho okufunayo ekhaya lakho.
I-Amazon Echo 3rd Gen ngama-euro angu-69,99 (Intengo ejwayelekile yama-euro angu-99,99).
Isizukulwane sesithathu se-Amazon Echo Dot ngama-euro angu-34,99 (Intengo ejwayelekile yama-euro angu-59,99). Imodeli nayo kufaka iwashi itholakala ngama-euro angu-44,99 (Intengo ejwayelekile ngama-euro angu-69,99).
Ikhamera Khalisa i-Cam yangaphakathi isinikeza Ividiyo eyi-1080p HD, ukuxhumana ngezindlela ezimbili, izaziso zesikhathi sangempela, ukufakwa okulula kakhulu futhi okuhambisana ne-Alexa. Uma ufuna ukugcina amavidiyo aqoshwa yikhamera yakho, ungasebenzisa uhlelo lwe-Ring Protect, insizakalo ebiza ama-euro ama-3 ngenyanga futhi egcina konke ukuqoshwa kwekhamera izinsuku ezingama-30. Intengo entsha I-Ring Indoor Cam ingama-euro angama-59, intengo engaphezu kokulungiswa kokuhambisana nokusetshenziswa okuhlukahlukene okusinikeza kona.
I-Amazon isinikeza inani elikhulu lemikhiqizo okufanele siyikhulise ukuphepha kwekhaya lethu. Ngaphezu kwekhamera ye-Ring Indoor, sinakho, a isistimu yekhamera yokuphepha yasendlini enamathuluzi wokuhamba, amakhamera okuphepha angaphakathi nangaphandle, imbobo yomnyango enekhamera ehlanganisiwe, insimbi yomnyango yekhamera enomtshina wokuhamba… Imikhiqizo esebenza ngokubambisana nemikhiqizo ehlukile ye- Ama-Amazon afana ne-Echo Show.
Uma ufuna ukuguqula i-TV yakho yakudala ibe ngeye smart noma ukhathele ikhwalithi engeyinhle yezicelo jabulela iNetflix, i-Amazon Prime noma i-YouTube enikezela ngamamodeli athile ngaphezulu kwama-euro angama-30, ungathola eyodwa yamamodeli amabili weFire Stick asinikeza wona, womabili afaka irimothi enemakrofoni ukusebenzisana ne-Alexa: Induku Yomlilo yama-euro angu-39,99 y I-Fire Stick 4k ngama-euro angu-59,99. Uma unemodeli yakudala, ungayithola nje umyalo omusha wama-euro angu-29,99.
55/65 intshi Samsung 4k TV
AbakwaSamsung basinikeza ithelevishini engu-55 intshi I-4k UHD, iyahambisana ne-Alexa ne-Google Assistant, i-HDR10 + kuphela I-589 euro. Kepha uma ama-intshi angama-55 amafushane, singakhetha imodeli engama-intshi angama-65, intengo yayo isala ama-euro angama-759 kuphela.
ICecotec Series 1490 Yokuhlanza Amarobhothi
ICecotec Series 1490 vacuum cleaner ihlanganisa ithangi elixubekile esingakwazi ngalo cleaner, shanela, mop and mop. Singayiphatha nge-smartphone yethu ukuze sikwazi ukuhlela ukusebenza kwayo, futhi iyahambisana ne-Alexa ne-Google Assistant. Intengo ejwayelekile yale vacuum cleaner ingama-euro angama-269, kepha isikhathi esilinganiselwe singakuthola nje I-179 euro.
Kepha uma izidingo zethu kungukuhlanza uketshezi nezinto ezinkulu kunothuli noma ukungcola okungadalwa emakhaya ethu, iCecotec isinikeza umshini wokuhlanza uketshezi kanye nokuqina okunamandla amalitha ayi-15 no-1400w wamandla. Kufaka phakathi isihlungi samanzi, isilawuli samandla, ayinaso isikhwama, ilungele zonke izindawo futhi inezinsiza ezi-5. Ngenxa yamasondo amane atholakala ezansi kwayo, sikwazi ukuyihambisa kahle. Intengo yayo ejwayelekile ngama-74 euros, kodwa isikhathi esilinganiselwe, singayithenga nge Ayikho imikhiqizo etholakele.
I-Moulinex processor yokudla
UMoulinex usinikeza irobhothi lasekhishini laseMaxichef nge Izinhlelo zokupheka ze-45, esingabhaka ngayo, senze izitshulu, ukudla okuthosiwe, ama-yogurts, okhilimu, okusanhlamvu, irayisi, ipasta, isitimu ... abantu). Intengo yayo ejwayelekile ngama-euro ayi-24, kepha ngesikhathi esilinganiselwe, singakuthola nje I-93,99 euro.
I-Samsung Galaxy A71 yama-euro angu-391
Okunye kokumunca okuthakazelisa kakhulu kwe-Samsung maphakathi nebanga, sikuthola kwi-Galaxy A71, i-terminal ehlanganisa isikrini esingu-6,8-intshi nesisombululo se-Full HD. Le modeli ethile iyi-SIM embaxambili, inayo I-6 GB ye-RAM ne-128 GB yesitoreji.
Esigabeni sezithombe, sithola amakhamera amane 64, 12, 5 no-5 mpx ngokulandelana. Ikhamera yangaphambili ifinyelela kuma-32 mpx futhi uma ibekwe emgodini engxenyeni engenhla emaphakathi kwesikrini. Intengo ejwayelekile yalesi siginali ngama-euro angama-469, kepha ngesikhathi esilinganiselwe, singakuthola nje I-391 euro.
I-Samsung Galaxy A51 yama-euro angu-299
Uma ufuna okungaphezulu kancane kwalokho esikunikezwa yi-Galaxy A50, ungakhetha imodeli ephezulu, i-Galaxy A51, imodeli enesikrini sohlobo lwe-Super AMOLED esingu-6,5-intshi, i-4 GB ye-RAM ne-128 GB yokugcina. Ngemuva, sithola amakhamera amane 48, 12, 5 no-5 ngokulandelana ngokungeziwe ngaphambili kwe-32 mpx. Intengo yayo: 299 euros.
I-Samsung Galaxy A40 yama-euro angu-199
Uma isabelomali sakho siqinile, inketho enhle kakhulu okufanele uyicabangele yiyona I-Samsung Galaxy A40, ukuphela esingakuthola ngama-euro ayi-179 kuphela futhi okusinikeza a Isikrini se-Super AMOLED esingu-5,9 intshi esine-FullHD + resolution. Ngaphakathi sithola iprosesa yakwa-Samsung ye-Exynos 7904 ephelezelwa yi-4 GB ye-RAM ne-64 GB yokugcina, isikhala esingasikhulisa sifike ku-512 GB ngekhadi le-MicroSD.
I-Samsung Galaxy Note 10 yama-euro angama-687
Kuncane noma kunalokho akukho esingakhuluma ngakho nge-Galaxy Note 10, i-terminal enhle esingayithola ekunikezelweni ngama-euro angu-687 kuphela, nge Isaphulelo esikhulu impela esivela kuma-euro angama-959 okuvame ukubiza. Le nguqulo ifaka phakathi i-256 GB yokugcina, inguqulo yaseSpain futhi ifaka i-8 GB ye-RAM.
IHuawei P30 Pro ngama-euro ayizi-550
IHuawei P30 Pro ibingenye yama-smartphones amahle kakhulu athulwe ngonyaka owedlule emakethe, hhayi ngekhamera kuphela, kepha nangokusebenza, ukusetshenziswa kwebhethri ... Ngonyaka emakethe, i I-Huawei P30 Pro iyatholakala ku-Amazon ngama-euro angu-550 kuphela, i-smartphone ukuthi okuncane noma akukho okumele kube nomona ngamatheminali aphezulu aphezulu emakethe.
IHuawei P30 Lite ngama-euro angama-199
Uma i-P30 Pro yeHuawei iphelelwa yisabelomali, ungaya kuhlobo lweLite. IHuawei P30 Lite iyisinali esine- Isikrini esingu-6,15-intshi, i-4 GB RAM, isitoreji esingu-128 GB futhi iphethwe yiprosesa yaseKirin 710. Ngemuva, sithola isethi yamakhamera ama-3 (48 + 2 + 8 mpx). Iphethwe yi-Android 9 enezinsizakalo zeGoogle, ngoba le ndawo yethulwa emakethe ngaphambi kokuvotelwa kukahulumeni waseMelika eHuawei. Intengo yayo ejwayelekile ngama-349 euros, kodwa okwesikhashana, singamthola ngama-euro angama-199 kuphela.
I-Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ngama-euro angu-189,95
Enye yama-smartphones athengiswayo kuleli sonto yiRedmi Note 6, i-terminal evela kumkhiqizi wase-Asia uXiaomi nokuthi singayithola ngama-euro ayi-189,95 e-Amazon. I-Xiaomi's Note 6 Pro isinikeza isikrini esingu-6,26-intshi ngohlaka oluncane phezulu. Isinikeza ukusekelwa kwe- i-SIM emibili, ihambisana ne-4 GB ye-RAM ne-64 GB yokugcina.
Ngemuva sithola i- Ikhamera embaxambili engu-12 no-5 mpx, ibhethri elingu-4.000 mAh nekhamera engaphambili eyi-12 mpx. Intengo ejwayelekile yeXiaomi's Redmi Note 6 Pro ingama-249 euros, kepha uma sisebenzisa ngokunenzuzo lo mnikelo, singonga ama-euro angama-60 kusuka enanini laso lokugcina.
I-Oppo A9 2020 yama-euro angu-184,99
Umkhiqizi u-Oppo usinikeza i-A9 2020, i-terminal ephelezelwa yi- I-4GB RAM, isitoreji esingu-128GB kanye nohlelo lwekhamera lwangemuva olunezinyawo ezine olwenzelwe nje I-184,99 euro. Isikrini sifinyelela kuma-intshi angu-6,5 ngesisombululo se-HD +, siphethwe yiQualcomm's Snapdragon 665 nekhamera ekhethekile engaphambili yama-selfies ayi-16 mpx.
I-Realme X2 Pro yama-euro angama-439
Inkampani iRealme ize eSpain ukuzohlala futhi yenze indawo ebalulekile emkhakheni obuswa ikakhulu yiXiaomi neSamsung, futhi phambilini yiHuawei. I-Realme X2 Pro, kuyisikhungo sokugcina esingaqhudelana namanani aphezulu kakhulu esingawathola njengamanje emakethe, okungenani ngokuya ngama-specs.
Lesi siginali, esabizwa ngama-euro angama-439 e-Amazon, siphethwe yi-Snapdragon 855+ (isizukulwane sesibili) esihambisana I-12 GB ye-RAM ne-256 GB yesikhala sokugcina. Isikrini, i-SuperAMOLED, sinjalo Amasentimitha angu-6,5 ngesisombululo se-FullHD + ne-90 Hz.
Ibhethri, elinye lamandla alo, lifinyelela kwifayela le- 4.000 mah ukushaja okusheshayo kuyahambisana. Esigabeni sezithombe singena amakhamera amane ukumboza zonke izidingo nangaphambili ikhamera eyi-16 mpx. Intengo ye- I-Realme X2 Pro, enguqulweni enamandla kunazo zonke ingama-euro angama-439 kuphela.
I-Realme 5 Pro yama-euro angama-219
Kepha uma ungafuni ukusebenzisa imali eningi ekuvuseleleni i-smartphone yakho, ungakhetha enye imodeli yeRealme, iRealme 5 Pro, i-smartphone ephethwe I-8 GB ye-RAM ne-128 GB yesitoreji sangaphakathi. Isikrini sifinyelela kuma-intshi we-6,3 ngembobo encane enkabeni ephezulu lapho kutholakala khona ikhamera.
Ngemuva, sithola isethi yamakhamera ama-4 ane-48 mp enkulu. Isethi iphethwe yiprosesa leQualcomm's Snapdragon 712 nge-intelligence yokufakelwa, isekela ukushaja okusheshayo futhi ivuselele ibhethri esikhathini esingaphezu nje kwehora. 4.035 mAh ibhethri. Intengo yayo ejwayelekile ngama-euro angama-249, kepha okwesikhashana, Ayikho imikhiqizo etholakele..
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amazon » Amadili amahle kakhulu kumagajethi (ngesonto lika-Meyi 18 kuya ku-24)
Ungalalela kanjani umsakazo oku-inthanethi kunoma iyiphi idivayisi
Ungayihlanza kanjani i-WhatsApp yethu ku-iPhone naku-Android